Igumbi lothando elinethala elikhulu kanye nedamu lokubhukuda elihlanganyelwe
Pemuteran, Bali, i-Indonesia
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Jane
ISumberkima iyidolobhana elingasogwini lolwandle eduze nePemuteran eduze nesiqhingi saseMenjagan, ipharadesi lokuntywila kanye ne-snorkeling. Inezindawo ezihlukene kanye nesiko langempela elicwile esikweni. Lapha ungakhululeka ngempela kude nesiphithiphithi saseningizimu. I-resort inokubukwa kwe-panoramic yamagquma, itheku laseSumberkima kanye nezintaba-mlilo zaseJava. Sinezindawo zokudlela ezimbili endaweni yokuphumula, ezinikeza ukudla kwasendaweni nokwamanye amazwe. Ithimba lethu lokwamukela izivakashi lingakuhlela zonke izinkambo zakho zokuvakasha, amaseshini e-yoga nokwelashwa kwe-spa.
U-Luwih, osuselwe ku-Sujati Luwih usho zonke izinto ezinhle ngesi-Balinese, futhi ongeke afune ukuthi indawo yabo yokuhlala eseduze kwechibi isho ubuhle! Igumbi lesabelomali elikuvumela ukuthi uzwe ubuhle be-Sumberkima ngokungaguquki, i-Luwih iyinjabulo kubangani abajabulayo nabangane abakhulu.
Ihlala noma iyiphi i-duo ejabule, i-Luwih inikeza ichibi okwabelwana ngalo kanye nethala elikhulu elinombhede oshwibayo ukuze uqhubekisele phambili ukuphupha kwakho eholidini. I-Luwih 3 iseduze kakhulu nechibi futhi inombhede owumbhede olungele nabantu abadala! Okubomvana, okunsomi nokusawolintshi kwesibhakabhaka esiphuma ilanga kuzowuthoba umphefumulo wakho futhi kukwenze uhefuzele ngokumangala. Nethezeka, khulula futhi wamukele ingane yakho yangaphakathi!
Igumbi lokulala 1: umbhede owodwa ophindwe kabili kanye nombhede omkhulu
4.90(20 okushiwo abanye)
I-North West BALI
I-Sumberkima Hill ilele eNyakatho Ntshonalanga Bali - indawo ecwile ilanga ezuza ezitshalweni nezilwane eziphefumulayo ezibiza lesi sifunda ikhaya kanye nezinto eziyiqiniso, zamasiko ezisinikeza umuzwa obusisiwe, onempilo. Kusukela emathempelini amadala kakhulu e-Bali kuya kwezinye zezindawo ezihamba phambili zokucwila emanzini kanye ne-snorkeling e-Indonesia, kusukela kusiko lolwandle elisemuva kuya kuphrojekthi yokuvuselela izixhobo, sinakho konke! Lona ngolunye uhlangothi lwe-Bali - i-alchemy ecashile kodwa enamandla yesiko, imvelo kanye nomphakathi.
Siseduze nesiqhingi saseMenjangan, esiyingxenye yeBarat National Park. Vakashela ipaki uhambo lwemvelo noma ukuvakasha kokubuka izinyoni, noma uze ukutshuza futhi ugibele i-snorkeling epharadesi. Indawo yokuqala ohambweni lwangasese oluya e-Menjagan Island isuka ethekwini lase-Bangsal, imizuzu emi-5 ukushayela wehle intaba. Ichweba lase-Bangsal liphinde libe indawo yokuqala ukuvakashela iphrojekthi yethu yendawo yokubuyisela kabusha izixhobo zokusebenza futhi linesiqhingi esinesihlabathi esimhlophe ongasivakashela ohambweni lwe-snorkelling noma i-barbecue yasebhishi. Ungakwazi futhi ukuqasha isikebhe ukuze uhlole imihlume futhi uqhubeke nohambo lwakho oluya esiqhingini sesihlabathi esimhlophe.
Sisungule i-NGO ebizwa ngokuthi i-Metamorfosa - leli thimba belilokhu libuyisela ulwandle ngosizo lozakwethu bendawo. Sakha i-ecosystem elinganiselayo engangenisa imali kubahlali ukuze kuqinisekiswe impumelelo yesikhathi eside. Sisiza ukuthuthukisa izimo ukuze amakhorali akhule kahle ngokulima izitshalo ezigcina amanzi ehlanzekile, njengamakhukhamba olwandle, ama-scallops nokhula lwasolwandle. Ngokunikeza ukuvakasha okuqondisiwe kanye nezinketho zoxhaso, singabandakanya izivakashi kunhloso yethu futhi sizivumele zinikele kuphrojekthi.
Sithemba ukuthi sizoba yisibonelo nendawo yokufunda kwezinye izindawo ezinamaphupho nezinjongo ezifanayo.
I-Metamorfosa isiqale inkulisa yamakhorali lapho izingcezu zamakhorali ezingane zingakhula ngaphambi kokuba sizibeke emifanekisweni eqoshiwe engaphansi kwamanzi. Le mifanekiso eqoshiwe enengane yamakhorali exhunywe kuyo yenza isiqalo setshe elisha elinempilo. Amaciko asebenza ochungechungeni lwezithombe eziqoshiwe ngaphakathi kwendikimba ethi ‘ushintsho’ oluhlanganisana lwakha igalari yobuciko engaphansi kwamanzi. Wamukelekile kakhulu ukuvakashela le galari yobuciko engaphansi kwamanzi futhi sithemba ukuthi uzokhuthazwa umlayezo wayo!
Ezinye izinto ongazenza:
Ungathatha i-shuttle yethu yamahhala ukuze uyosnorkelling endaweni yokubuyiselwa kwezixhobo zethu echwebeni lase-Bangsal noma ezakhiweni ze-Biorock e-Pemuteran, noma ube nosuku lolwandle olushisayo lapho.
Kunamathempeli amaningi athakazelisayo endaweni. Umqondisi wethu wendawo angathanda ukukuthatha uqwale intaba. Ungaqala uhambo olusuka ku-villa yakho futhi uzwe ukuphuma kwelanga usuka emagqumeni ase-Sumberkima.
Ithimba lethu lingahlela nohambo oluqhelelene kancane, njengempophoma i-Aling Aling enokweqa namaslayidi kwabafunayo, i-Sekumpul Waterfall enhle, i-Ijen Crater e-Java, indawo yaseMedewi etshuzayo, amasimu erayisi e-Pupuan, nokunye okuningi. .
Indawo yokuhlehla ifana nedolobhana lase-Balinese, elineqembu elinobungani, iningi labo elivela e-Sumberkima. Bazokuyisa ezindlini zabo, bazizwele umcimbi uma ukhona. Ngaphakathi kwebanga lokuhamba ungathola idolobhana eliyiqiniso kanye nohambo oluhle lwemvelo.
Abasebenzi bethu abanomusa bayatholakala kuwe kukho konke ukuhlala kwakho ukuze uqiniseke ukuthi uhlala unethezekile.Ithimba lethu lokwamukela izivakashi lingakusiza nganoma yimiphi imibuzo ongase ube nayo, lihlele izinkambo ezifanelana nezifiso zakho, uhambo lokubhuka lokudlala i-snorkelling noma ukutshuza, ukubhucunga umzimba, i-yoga nokunye.
Sine-divemaster yasendaweni yokukuqondisa kuwo wonke amazinga e-diving noma isitifiketi sakho se-Padi.Wazi zonke izindawo ezinhle zokutshuza kanye ne-snorkeling futhi unguzakwethu wephrojekthi yokuvuselela izixhobo, i-Metamorfosa.
Kukhona abasebenzi basekhaya abatholakalayo ukuze bahlanzeke nsuku zonke futhi bavikeleke abakhona ebusuku.
Abasebenzi bethu abanomusa bayatholakala kuwe kukho konke ukuhlala kwakho ukuze uqiniseke ukuthi uhlala unethezekile.Ithimba lethu lokwamukela izivakashi lingakusiza nganoma yimiph…
Hlola ezinye izinketho ezise- Pemuteran namaphethelo